ကျွန်တော့် ဘ၀ဇာတ်ခုံ: ပုံရိပ်ဟောင်းများ
သြော် မောင်မျိုးမျက်နှာပေါက်ဘယ်သူနဲ့ဆင်ပါလိမ့်မှတ်ပါတယ် .
ငယ်ငယ်တုန်းက ပုံလေးတွေက အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ တကယ့်ကို အမှတ်တရဖြစ်စေတယ်။ ပုံတွေ ဂရုတစိုက်သိမ်းထားတာ အားကျမိတယ်။
တခါတလေလည်း လွမ်း .. တခါတလေလည်း ဘာကို တမ်းတမှန်းမသိ .. တခါတလေလည်း ၀မ်းနည်းသလိုလို .. ခုလည်းဖတ်ပီး အီလည်လည် .. အင်းးးးးးးးးးးးး
ဓါတ်ပုံဟောင်းတွေက အမြလိုလို နူးညံ့တဲ့ ဝေဒနာလေးတွေ တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခု ပေးတတ်ပါတယ်၊ ပုဆိုးကို ကြပ်ထုတ်နေအောင် ဝတ်တတ်တဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက် ဆုယူနေတဲ့ ပုံမှာ ခုနှစ်ကိုတွေ့တော့ ငါလည်း အတော်အသက်ရပြီပဲ လို့ တွေးမိသွားတယ်ဗျာ...။
မသေ မချင်း ရေးနေမယ့် သူဂျီးကများ...
ဘလော့ကို ပိုပြီးငြိတယ်ဆိုတာလေးသဘောကျတယ်... ဒါမှဘလော့ဂါအစစ်ကွး))
အေးကွယ်....ကိုယ်ကတော့ ဖဘတစ်လှည့် ဘလ တစ်လှည့်ပဲ....၊အပျိုကြီးတစ်လှည့်၊မြီးကောင်ပေါက်လေး
နော်...၊ဒါနဲ့ ဒါ့ပုံထဲမှာ သူငယ်ချင်းတွေချည်းတွေ့ရတယ်..၊
ကိုမျိုးရေ... ငယ်ဘ၀လေးတွေကို ကြည့်ရင်း လွမ်းသလိုလို တောင် ဖြစ်သွားတယ်။ အမှတ်တရသိမ်းထားတော့ အမှတ်ရတိုင်း ကြည့်လို့ရတာပေ့ါခင်ဗျာ။
ငယ်ငယ်တုန်းကပုံတွေပြန်ပြန်ကြည့်မိရင် မှန်ကြည့်ချင်စိတ်ပါ ကုန်ကုန်သွားတယ်...ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြန်မရနိုင်တော့တဲ့ ထာဝရဆိုတာကတော့ ရင်ထဲမှာ ရှိကြဦးမှာပေါ့လေ...
မောင်မျိုးရဲ့ငယ်ဘ၀ ပုံလေးတွေနဲ့ အတူ
အစ်ကိုလဲ ဓာတ်ပုံအဟောင်းတွေ သိမ်းရတာကို ဝါသနာပါတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ဓာတ်ပုံသိပ်ရိုက်ပေါ့ ခုတော့ ပျင်းသွားပြီ... ဓာတ်ပုံအဟောင်းလေးတွေ ကြည့်ပြီးရင် ငယ်ဘဝကို ပြန်ရောက်သွားသလို ခံစားရတယ်။ ဓာတ်ပုံလေးတွေကို ကြည့်သွားပါတယ် မောင်မျိုးရေ...
မဒမ်ကိုး....း) တကယ်တူရင် မုန့်ကျွေးမယ် တူမှမတူတာကိုးဗျ ကိုရင့် ဆီမှာပဲ ကျနော့်အစား မုန့်ဝယ်ကျွေးခိုင်းလိုက်တော့နော့် ။
မမြသွေးနီ.... ဟုတ်တယ်ဗျ ကျနော့်အတွက် အမှတ်တရတွေက တန်ဖိုးထားရတဲ့အရာတွေလေ အဲ့တာကြောင့် မြတ်နိုးစွာသိမ်းထားမိတယ် အစ်မရေ့။
ဘလက်ရို့စ်... ငယ်ငယ်ကအကြောင်းပြန်တွေးမိတော့လည်း တစ်မျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်မှတ်လားဗျ .။
မိုးခါး...နင်လည်း ခံစားချက်တွေက စာအဖြစ်ချရေးသင့်တယ်ဟ ရင်ထဲက စကားလုံးတွေကို စာစီရတာလည်း တစ်မျိုးခံသာတယ်မှတ်လား ရေးပါ ဖတ်ချင်သေးတယ် ။
ကိုညီ....အသက်ကြီးလား မကြီးလား မမြင်ဖူးတော့မသိဘူးရယ် အဲ့တာကြောင့် ဓာတ်ပုံပြပါ ဓာတ်ပုံဆရာရေ့း)
မိုးယံ...သိလှကြီလားး မတာမရဲ့း)
မရို့စ်... ဟုတ်တယ် ဘလော့က ပို စမတ်စ်ကျတယ်ထင်တယ်ဗျ ကျနော်ကတော့ ကြိုက်တယ် ။
ကိုညိမ်းနိုင်.. ငယ်ချစ်က အိမ်ထောင်ကျလို့ ခလေးတောင်ရနေပြီ ပုံတင်လို့မရတော့ဘူး ဆင်ဆာမလွတ်ဖြစ်လိမ့်မယ် ။
ကိုအေအိတ်....ဟုတ်တယ်ဗျ ပုံရိပ်ဟောင်းတွေက အတိတ်ရဲ့ အကောင်းဆုံး သက်သေတွေပဲလို့ကျနော်တော့မြင်တယ်။
ဆြာ.... က သိပ်ပုံမပြောင်းပါဘူးဗျာ အခုက ပိုတောင်နုနေသေးတယ်။ ထာဝရဆိုတာ ရင်ထဲရှိနေအုံးမှာပါတဲ့လား ကောင်းလိုက်တဲ့ စာသားလေး။
jasmine(တောင်ကြီး) ....ဟုတ်ကဲ့ဗျ ပုံတွေကြည့်သွားပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
ကိုညီရဲ။။။ ကျနော်ကောပဲ ငယ်ငယ်ကမှမဟုတ် ကင်မရာလေး မပိုင်ခင်အထိ ရိုက်ချင်လိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံ ခုကျ စိတ်မပါတော့ဘူးး ချောင်ထဲရောက်နေပြီ ။
ပုံရိပ်ဟောင်းဆိုတာ အနာဂါတ်အတွက် အမှတ်တရ ကမ္ဗည်းတင်ထားတဲ့ မှတ်တမ်းလေးတွေပေါ့ မောင်မျိုးရေ။
လူ့အကြိုက်နတ်မလိုက်တဲ့လေ။ ခက်ခက်ခဲခဲယူရတဲ့ ပစ္စည်းကိုနှစ်သက်ပြီး လွယ်လွယ်ကူကူရမှာကို မမက်မောတာ လူ့သဘာဝပါ။
ကိုယ့်အတွက် ဘလော့ကတော့ ဒိုင်ယာရီပါပဲ..မောင်မျိုး ပို့ စ်ကို ဖတ်ရတော့ ပြန်ငယ်သွားတယ်...:)
ငယ်တုန်းကပုံတွေက ပြန်မရနိုင်တော့တဲ့ အတိတ်ရဲ့ ခြေရာလေးတွေလေ..
မြင်တိုင်း သတိတရနဲ့ ပြန်လိုချင်တဲ့ အရာတွေပေါ့။
သိမ်းထားနိုင်ရင် ပုံတွေထဲကနေ ကိုယ့်ခြေရာလေးတွေ ပြန်ရှာလို့ ရတာပေါ့နော်..
ဓာတ်ပုံများများရှိလေ အတိတ်ကို များများသိမ်းဆည်းထားမိလေပါဘဲ..
တို့ကျတော့ ဓာတ်ပုံတွေ သိပ်မရှိတော့ အတိတ်ခြေရာတွေကို ပြန်ကောက်တာ ကောက်မရဖြစ်နေရော..
အန်တီတင့်...ပုံရိပ်ဟောင်းဆိုတာ အနာဂါတ်အတွက် အမှတ်တရ ကမ္ဗည်းတင်ထားတဲ့ မှတ်တမ်းလေးတေ တဲ့လားဗျ သိပ်လှတဲ့တင်စားမှုပဲ ကျေးဇူးတင်တယ် တီတင့်လာတိုင်း စိတ်ဓာတ်အစဉ်ကြည်လင်အေးမြပါစေကွယ် ဆိုတာလေးက တကယ်ကိုစိတ်ချမ်းသာဖို့ကောင်းတယ် ။
မစန်းထွန်း... ငယ်ပါသေးတယ်ဗျ သိပ်မကွာကြသေးပါဘူး ခုမှ ၂၀ ကျော်တာပဲကိုး))
မချော...ဟုတ်တယ်မချောရေ့ ကျနော်လည်း ကောလိပ်တက်မှပဲရိုက်ဖြစ်တာလေးတွေပါ အငယ်ကပုံရိပ်ဟောင်းတွေကတော့ မရှိသလောက်ပါပဲ ။ မချောကတော့ အငယ်ကလည်းချောမှာသေချာပါတယ်ဗျာ. ။